फक्सवागनको नयाँ ट्वारेग-आर नेपाली बजारमा, के के छन विषेशता ? - Aarthiknews
फक्सवागनको नयाँ ट्वारेग-आर नेपाली बजारमा, के के छन विषेशता ?
काठमाडौं । नेपालका लागि फक्सवागन गाडीको आधिकारिक वितरक पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रा.लिले कम्पनीको टप रेन्जको फ्ल्यागसिप मोडल ट्वारेग–आर नेपाल भित्र्याएको छ । पहिले देखि नै लोकप्रिय ट्वारेग अब आर–ट्रिटमेन्टका साथ प्रशस्तै फिचर थप भएर आएको छ ।